Congress | Myanmar Gazette News Media Forum Network
မြန်မာ့ဂဇက် လွှတ်တော် ( Myanmar Gazette Virtual Congress Portal )
Template Upgrade လုပ်လိုက်ပါကြောင်း
မောင်ပေအား ပြည့်သွားသောပွိုင့်(ကျပ်) ၁သိန်းလွှဲရန်ဆက်သွယ်ပါကြောင်း
ကိုပေါက်အား ပွိုင့်(ကျပ်) ၁သိန်းရမရ ဆက်သွယ်ပါကြောင်း
မိမိ၏ပို့စ်တွင် ၀င်ရေးပေးသူများ၏ ကော်မန့်များကို ဖျက်ခြင်း၊ Edit လုပ်ခြင်းများ သတိပေးခြင်းမရှိ ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့် Contributors များအား ကောမန့် Edit လုပ်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပါကြောင်း
Google Play အတွက် App လုပ်ကြည့်လိုက်ပါကြောင်း..။
New User Registration အတွက် စပန်းအကာအကွယ် Plug-in ထည့်လိုက်ပါကြောင်း..
လူမဟုတ်သူတွေ ရီဂျစ်တာလာလုပ်တာများနေသညာ် ယူဆပါသဖြင့်.. သင်္ချာတွက်ရသော Plug-inအစား နည်းနည်းပိုခက်တာထည့်လိုက်ပါကြောင်း..
– မန်းဂဖက်ကွန်ဖရင့်န်တက်ခဲ့သည့် သူများအားရာထူးတိုးပေးနေပါကြောင်းနှင့် ကွန်ဖရင့်န်တက်သော်လည်း. မည်သည့်ပို့စ်မှမတင်ရသေးသည် ၂ဦးကိုမူ ချန်ထားပါဦးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
Plug-in တချို့ upgrade လုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ..
ပြဿနာရှိရင်ပြောစေလို…- ၁သိန်းပြည့်တော့မည့် etone အတွက်ငွေလွှဲပြင်ဆင်နေပါကြောင်း..
ကထူးဆန်းမှ ဒေါ်လာ၁၀၀ လှူထားပါကြောင်းရွာသူားများကို အသိပေးပါတယ်ခင်ဗျား၊ ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါလို့။ ၁ခါ..၂ခါ…. အကြိမ်ကြိမ်လှူနေတဲ့ ကထူးဆန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
တိုင်ဝမ်က KoAung ထံမှ paypal တဆင့်လွှဲလှူငွေ ဒေါ်လာ၃၀၀ လက်ခံရရှိထားပါကြောင်း..။ ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါနော။ အခုလှူတာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ။ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလကလည်း ဒေါ်လာ၃၀၀ လှူထားဖူးပါတယ်။
ရွာသူားများရဲ့ အမည်ကိုတပ်ပြီး ခနဲ့စာ သရော်စာများရေးတဲ့ကိစ္စကတော့-
တကယ်တော့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဆိုရင် ဘယ်လိုလူမျိုးမှာ ဘယ်လိုထိခိုက်တယ်ဆိုတာ
လူအမျိုးမျိုးအလိုက် ကွဲပြားပါတယ်။ မနစ်နာအောင်အမြဲရေးနိုင်ဖို့ မသေချာပါဘူး။
ဒီလူက ဒီလိုရေးရင်စိတ်မဆိုးပေမယ့် ဟိုလူကရေးရင်တော့ စိတ်ဆိုးမယ် ဆိုတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။
ဘယ်သူကဖြင့် ဘယ်လိုရေးရင် စိတ်မဆိုးဘူးလို့လဲ စာချုပ်ကြိုမချုပ်ထားပါဘူးနော…။
ဒီတော့ မရေးလျှင်အကောင်းဆုံး၊ ရေးလျှင်တော့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာအသိပေးသင့်ပါတယ်။
အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက ဌာနများမှ လူအမည်ရာထူး အတိအကျနဲ့ ဝေဖန်ရေးသားရာမှာ ရေးသူက လုံးဝတာဝန်ယူရမှာမို့ ရေးသူရဲ့ identity ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ပိုစ့်များ ကွန်မင့်များကိုသာ လက်ခံသင့်တယ်။ ဥပမာ ကျုပ်ဆိုရင် အမည်ရင်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ အလုပ်အကိုင်တွေကို အများသိအောင် profile တင်မထားဘူး။ ကျုပ်လိုလူမျိုးက အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက ဌာနများမှလူများကို လူအမည်ရာထူး အတိအကျနဲ့ ဝေဖန်ရေးသားရင် ခွင့်မပြုထိုက်ဘူး။ Mod တွေက ဖျက်ပစ်သင့်တယ်။ ကိုယ်ကျတော့ မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားပြီး သူများကို တဦးချင်းခွဲပြီး လက်ညှိုးထိုးဝေဖန်တာကို ခွင့်မပြုထိုက်ပါ။
အမှန်တော့ မူကိုပဲ ဝေဖန်ခွင့်ပေးသင့်တယ်။ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ လူကိုတော့ ဝေဖန် စွပ်စွဲ ခွင့် မပေးသင့်ပါ။ ဒီရွာဗွက်ပေါက်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်း……။
etone ထံ မန်းဂဇက်တွင်စာရေးသားနေခြင်းအတွက် ပွိုင့်၁သိန်းပြည့်သွားသဖြင့် ရပိုင်ခွင့်ငွေ(ဒုတိယအကြိမ်) ကျပ်၁သိန်းလွှဲပြီဖြစ်ပါကြောင်း..
ကမ္ဘာ့ကျွန်းနိုင်ငံရောက်ရွာသူား၃ဦးမှ စုပေါင်းလှူဒါန်းငွေ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ယနေ့တွင် paypal မှတဆင့်လက်ခံရရှိပါကြောင်း ရွာသူားများအားဝမ်းမြောက်စွာအသိပေးပါကြောင်း..
အဆိုပါငွေကို Server/Website Performance မြှင့်ရန်အခြားကုမ္ပဏီတခုငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သုံးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
-May 2014 တွင် ကထူးဆန်းမှ ၁သိန်းနှင့် ကကြောင်ကြီးမှ ၁၀၀ဒေါ်လာ ရွာရံပုံငွေအဖြစ်လှူထားပါကြောင်းနှင့်…